DAAWO:-Jabhada Jeneral Xuud oo furatay xarun ciidanka lagu tababaro+SAWIRRO | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Jabhada Jeneral Xuud oo furatay xarun ciidanka lagu tababaro+SAWIRRO
DAAWO:-Jabhada Jeneral Xuud oo furatay xarun ciidanka lagu tababaro+SAWIRRO
Dhaqdhaqaaqa hubeysan ee la baxay Golaha Samata Bixinta Hiiraan ee fadhigoodu yahay deegaanka Ceelgaal oo qiyaastii Baledweyne kaga beegan 13KM ayaa halkaasi ka dhagax dhigay xarun ciidan oo ay ugu magac dareen Dugsiga Tababaradda Ciidanka Janaraal Xuud.
Dhagaxdhiga xarunta ciidan ayaa waxaa ka qeyb galay qaar ka mid ah bulshada qeybaheeda kala duwan madax iyo Sarakiil ka tirsan dhaqdhaqaaqa Samata Bixinta Hiiraan.
Masuliyiinta Golaha Samata Bixinta Hiiraan oo goobta ka hadlay ayaa sheegeen iney tahay sababta dugsigan loo furay sidii loo haqabtiri lahaa baahoyaha ciidamada reer Hiiraan waxayna sheegeen inuu yahay Dugsigii ugu horeyay ee 30 sano kadib laga furo gobolka Hiiraan laguna tababari doono ciidamada gobolka Hiiraan.
Janaraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo ah hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Samata Bixinta Hiiraan oo ah shaqsiga loogu magac daray xeradan ciidan ayaa goobta ka sheegay iney ujeedadooda tahay tayeynta iyo kor u qaadista ciidamadii hagaajin lahaa sugida amaanka iyo difaaca gobolka “ayuu yiri Janaraal Xuud”
Janaraal Xuud ayaa sidoo kale si cad u sheegay ineysan jirin wax wadahadal ah oo ay la galayaan maamulka Hirshabeelle.
“Hirshabeelle waxaa lagu dhisay jujuub waana ognahay cida dhistay marka waxan leyahay yaanan la isku dayin in markale rabitaankeena la jajuubo hadii kale waxa ka dhalan karta arinkaasi cawaaqib xumo marka dowlada dhexe waxan ugu baaqeyna in la saxo waxa qaldan si loo damiyo arintan faraha kasii baxeysa ” ayuu yiri Janaraal Abuukar Xuud.
Furitaanka xeradan ciidan ee Janaraal Xuud ayaa imaaneysa xili la sheegay iney guuldaro kusoo dhamadeen wadahadalo dhexmaray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo madaxda Golaha Samata Bixinta Hiiraan kuwaas oo xal loogu raadinayay tabashada dhaqdhaqaaqa Samata Bixinta ee diidan dhismaha Hirshabeelle iyo jiritaankeedaba.
Previous articleSaraakiil safaarad ku xirnaa muddo 30 sano
Next articleDAAWO:-Cabdirashid janan oo cadeeyay in isaga iyo Kanya weerari doonaan Beledxaawo
Khayre oo ku laabtay Dhuusamareeb
Deni oo magacaabay wasiiro cusub kuwane cayriyay